Uyazi njani ukuba yeyiphi idilesi ye-IP kwi-imeyile ye-Hotmail | Iindaba zeGajethi
SKukho uninzi oluye lwabuza indlela yokwazi idilesi ye-IP ye imeyile kwiHotmail. Ke namhlanje ndiza kukuxelela ukuba ungayenza njani ngokulula.
Pusenokuzibuza Kutheni le nto umntu efuna ukwazi idilesi ye-imeyile ye-imeyile? kwaye iimpendulo zininzi, kunokukunceda ukuba uyazi ukuba i-imeyile ethunyelweyo yeyenkampani osebenzela kuyo (ene-IP esisigxina) okanye nokuzithumela i-imeyile kwaye wazi ngokuzenzekelayo ithini i-IP yakho. Kuya kubakho nabo bafuna ukusebenzisa i-IP ukuhlasela iakhawunti kunye nokufumana iipassword zeHotmail, kodwa ezi imigewu enobubi (Kukwakho nabagculi abahle) esele bayazi indlela yokufumana i-IP, nangona oku akwanelanga ukufumana nantoni na, kwaye abayi kufumana nto intsha apha. Nangeyiphi ndlela Kulula kakhulu ukwazi i-IP yomthumeli ngenguqulelo entsha yeHotmail. Masibone ukuba ungayenza njani:
1) Vula iakhawunti yakho yeWindows Live Hotmail kwaye ukuba ukwinguqulelo esisiseko kuguqulelo olupheleleyo, isimahla, yenziwe ngomzuzwana kwaye emva koko ungabuyela kwinguqulelo esisiseko ngokukhawuleza ukuba ukhetha njalo. Ukuba awuyazi indlela yokuya kwenye inguqulelo ukuya kwenye, funda «Ungayitshintsha njani inguqu kwiHotmail» kwaye uya kubona ukuba kulula kakhulu.
2) Ucinga ukuba sele usebenzisa ingxelo epheleleyo ye-Hotmail, yiya kwi Inbox kwaye ubeke isikhombisi semouse ngaphezulu kwe-imeyile apho ufuna ukufumana i-IP yomthumeli. Cofa kunye iqhosha lesibini imouse (ihlala ilungile) kwi-imeyile kwaye iwindow iya kuvulwa apho kuya kufuneka ukhethe "Jonga ikhowudi yemvelaphi".
3) Kwifestile evulayo kufuneka ujonge umgca othi "I-X-yokuqala-IP: [XXX.XXX.XXX.XXX]" apho i-XXX izakubonisa amanani enza idilesi ye-IP yomthumeli we-imeyile ye-Hotmail.
Y kuko konke, uyakuqonda njani konke "X" Ezivela kwimifanekiso endizibekileyo ukufihla iidilesi zabahlobo bam, uyabona ukuba kube lula kangakanani. Ndifuna ukubulela UEri Wayengowokuqala ukumbuza imibuzo kwaye yayinguye ogqiba wachaza ukuba yenziwe njani. Imibuliso yesidiliya.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Uyazi njani ukuba yeyiphi idilesi ye-IP kwi-imeyile ye-Hotmail
Ndidinga nje ukwazi i-IP yomamkeli we-imeyile. Ndingene apho ubutshilo i-X-Originating-IP: ebonakala kum iyafana kwii-imeyile endizaziyo ngokuqinisekileyo ukuba zindithumela ukusuka ku-no. ezahlukeneyo ip's. Kutheni kunjalo?
enye: kuba ngamanye amaxesha idatha malunga ne-X-Originating-IP: ayiveli eposini ??
UJuana ndicinga ukuba ifihliwe ngasemva kommeleli okanye ukuba zithunyelwa zivela kwiseva yeposi eqhelekileyo yiyo loo nto le IP ibonakala.
Molo celeste, ulivulile iphepha elinekhowudi yemithombo yeposi kwaye awuyiboni i-x-originating-ip? Awuboni umgca okanye ukuba ubona i-x-originating-ip kodwa ecaleni kwayo akukho nto ivelayo ?
Molo, ndicinga ukuba inkcazo ibalaseleyo, kodwa andiyifumani i-IP ngale ndlela. inokungayifumani i-X-Originating-IP? Enkosi
Ndinedilesi ye-IP kodwa yenzelwe ntoni ukuba ndingafumana ipaswedi yomsebenzisi endimfunayo kwaye ineakhawunti ye-hotmail-
Peter ayilunganga loo nto. Kwakhona, mhlawumbi andikuqondanga kakuhle, kodwa ukuba into oyifunayo kuku "hack" iakhawunti ye-hotmail, kuya kufuneka uyazi ukuba oku akukho semthethweni. Njengoko bendikuxelele, mhlawumbi bendingakuqondi, kwaye ukuba kunjalo, ndiyaxolisa kodwa kuyo nayiphi na imeko kuya kufuneka ulumke ukuba awufuni kungena engxakini. Khumbula ukuba yonke into ekwi-Intanethi ishiya umzila kwaye nangona "abanye becinga" ukuba ukufihla emva kwama-20 kunye nezinye iindlela ezifanayo kuyasetyenziswa kubo, xa umntu ochaphazelekayo enezixhobo, umhlaseli-ongenayo ugqibela ngokubanjwa. Konke okugqibelele.
Molo, unokufumana ukuba ngubani ophethe idilesi ye-hotmail. Bandinike nje idilesi kwaye ndifuna ukwazi igama lalowo ubhalisileyo.
Sebenzisa i-injini yokukhangela engentla okanye ujonge udidi "lwe-imeyile". Uya kuyifumana into oyifunayo.
Kulungile. Iinkcukacha ezincinci ezingacacanga kum, kwaye kungenxa yokuba ndingu-newbie kule nto kodwa ukuba ndiyayibona i-x-originating-ip into enkosi ngengcebiso yakhe ndingayenza, kodwa khange andixelele nokuba kuphi iposi yavela, ndenze into embi?
Enkosi ngengcaciso yakho noncedo lwakho.
Goel eya kukuxelela kuphela idilesi ye-IP yeposi, akukho nto iyenye.
Ndiqonde kakuhle ukuba ungayifumana njani i-IP ye-imeyile eshushu, kodwa uyazi njani ukuba basebenzise ikhompyuter efanayo ukuthumela i-imeyile kwiakhawunti engekho kwi-hotmail?
Zonke ii-imeyile ezithunyelwa ngabantakwethu kwiiakhawunti ezahlukeneyo ze-hotmail, kwikhompyuter efanayo ukuba ndizifumana zine-IP efanayo, kodwa xa zivela kwiakhawunti engeyoyayo kwi-hotmail andifumani «X-Originating-IP
Ewe ndicinga ukuba iseva ethumela iposi evela kwenye inkonzo ifihla ip.
KAKHULU!! imimoya ufumane i-10 ngale gracais yokufundisa * - *
Kwaye ithi phi ukushiya i-omentary ingakanani i-3 + 2 XD? Khange ndiqonde ukuba yenzelwe ntoni.
UMary kwi-intanethi kukho iinkqubo ezithile ezishiya ngokuzenzekelayo izimvo kuzo zonke iifom abazifumanayo. Into engu-3 + 2 yindlela yokuqinisekisa ukuba lowo uphawuleyo ngumntu. Konke okugqibelele.
Ilungile igalelo lakho lokwazi idilesi ye-IP kwi-hotmail, siyayixabisa.
Ngoku ndingathanda ukwazi ukuba ndiphumeza njani ngokufanayo nge-imeyile efikelela kwi-GMAIL.
UFrancisco uza kuwubhala phantsi umbuzo wakho kwaye xa ndinakho ndiza kuphanda ngalo mbandela. Konke okugqibelele.
kwi-gmail kuya kufuneka uyivule imeyile ofuna ukuyifumana ip yayo. Emva kokuvula umyalezo owufumeneyo, yiya kwikona ephezulu ngasekunene komyalezo kwaye wenze ikliphu ku "myalezo wokuqala" nakwi-x-yoqobo yi-ip.
Ewe, ndiyabona ukuba yindlela efanayo. Ndizakuzama, enkosi ngesaziso.
UJorge Fierro sitsho
Ndingathanda kuqala ukubulela, ulwazi lwakho lundincedile kwiakhawunti yam ye-hotmail kodwa ndingathanda ukwazi i-IP yomthumeli obhalela iakhawunti yam ye-yahoo.
Uxolo Jorge kodwa okwangoku andazi ukuba ndenze njani, ukuba umntu uyayazi ndiyathemba ukuba bayahlomla. Konke okugqibelele.
Ndiye ndagqogqwa i-msn yam ... prO ayisiyonto iphuma emhlabeni kuba ndicinga ukuba uninzi lwabantu luye lwaqhekezwa ...
Nditshintshe ukungena kwam nayo yonke into ...
Kuyavela ukuba ndikhuthuziwe andazi ukuba lubaluleke kangakanani ulwazi ... kubaluleke kakhulu kubaluleke kakhulu ...
Bandixelele ukuba ndiqhakamshele i-hOtmail kwaye ndibaxelele ukuba bandinike ilog ye-IP ukuba bazokufaka iakhawunti yam emva koko babeke umhla kwaye babize i-IP isp ukuba ibuze idatha ngalo mntu.
Inyaniso ivakala inzima kodwa ndikulungele ukwenza nantoni na ukuze ndazi ukuba ngubani ...
Ndiyamkrokrela umntu endingamaziyo, andinabungqina kwaye andinakwenza nto ...
Kwakungayi kuba nje info. ewe hayi q tmb. Ndithukiwe ngabantu endinxibelelana nabo, besithi ndinguye kwaye uhlobo lwaqala ukuthetha inkohlakalo ezininzi kwaye zandizisela iingxaki ezinkulu kakhulu kuba ndade ndathetha nesoka lam ...
Ukuba ngenene unayo indlela yokundinceda ndiphume kule khawulezileyo, ndixelele ukuba unxibelelana njani nam ngeHotmail?
kwaye ndilindele impendulo yakho kwangoko ...
I-Brianda inyani kukuba andinanto inokukunceda, ukuba bakwenzakalisile, ndiyacebisa ukuba uyixele. Uxolo. Konke okugqibelele.
I-x-evela-ip ayibonakali kwii-imeyile ezishisayo. Nokuba ndigqithisela enye kum andiluboni olo khetho
wavuka u-mary sitsho
Molo, ndivuke ngu-fii, ukuba umntu angandinceda, ndifuna ukwazi ip ukuba ngubani ondithumelela ii-imeyile ezingathandekiyo eofisini zivela kwi-gmail kwaye i-imeyile yam ivela kwi-gmail, ukuba kukho umntu owaziyo ngomyalezo, ndithumele phendula ku xxxxx@gmail.com imuchas Gracias
Molo, ngokugqwesileyo, sele ndinayo i-IP, kodwa ndingafumanisa njani ukuba yeyiphi na idomeyini kwaye nangaphezulu ungalazi igama lomntu?
ukongeza into kulapha ngasentla, ungalazi igama lomntu? Ngenxa yokuba amaxesha amaninzi ii-imeyile azichazi ukuba ngubani ozithumileyo, unokufumana umzekelo ukuba yeyiphi inkampani evela kuyo i-imeyile?
I-Abelardo ngalo mzuzu unokwenza irekhodi ukwazi ukuba ivela phi isizinda, umntu osemva kwayo yenye into, ukufumanisa ukuba ufuna umyalelo wenkundla, ngaphandle kokuba uvela kwidilesi ye-IP eyahlukileyo apho inokuba inye kuphela umntu, kodwa oku akuqhelekanga.
Molo, jonga, ndifuna ukufumana i-IP ye-imeyile evela kwi-gmail, ndine-hotmail kunye namanyathelo endiwaqondileyo ngokugqibeleleyo, kodwa ngee-imeyile ozifumana kwi-gmail andiyifumani i-IP, ndijonga phi ngayo?
Funda le ntetho ingekhoyo ngasentla.
INYANISO LOKUVAKALISA KWANELE KULUNGILE
molo ndifuna uncedo lwakho .. !! Ndine-IP kodwa ndifuna ukwazi ukuba yekabani ??? kuba babhalela kum ngokungaziwa !! Inga???? uyandinceda ???
Akunakwenzeka ukwazi ukuba ngubani osemva kwe-IP ngaphandle komyalelo wenkundla.
Umhlobo wam uthi intombi yakhe ibhalela i-imeyile kumntu angamaziyo. Intombazana eyintombazana ithi ifumene ukuba kutheni ii-imeyile zine-DNI (kufuneka ibe yi-IP) emisela ukuba umyalezo uvela phi kwaye ithi umyalezo uvela ngokukodwa kwidolophu yase…. (Ngaba kunokwenzeka ukuba ubhale ngokukodwa besuka kwesiphi isixeko okanye idolophu? Kubonakala kum ukuba umhlobo wam ngu chamuyando… enkosi…
hahaha jsuto endikudingayo, kuba batshintshele kule nguqulo bendingazi ukuba ndizibona njani ii-IP ngaphambi kokuba zisebenze ngakumbi kwaye umbono awunangxaki kangako, kodwa eli cebiso liluncedo kakhulu, enkosi madoda !!!
Ndifumana ii-imeyile kumntu endingazi nokuba ungubani kwaye ndingathanda ukwazi ukuba ngubani ofihlayo ukuba uyabona i-IP ye-imeyile ye-Yahoo. Enkosi kakhulu
Ndikugqithisela ikhowudi yemvelaphi andifumani kwanto.
UKUHLAZIYWA KWI-VINEGAR ASSASSIN-
Ngaba umntu angandinceda ngale nto ndiyibekileyo kwaye andixelele ukuba ndingayazi njani into malunga nokuba ngubani onokuthi andithumelele ii-imeyile?
@josxxx ukuba kunokwenzeka ukuba uyazi kodwa kufuneka ibekhona ngalo mzuzu.
@estel i-ip ifihliwe emva kweeseva ze-Yahoo kwaye akunakwenzeka ukuba uyazi ip yasekuqaleni kunye nedatha.
Enkosi kakhulu umbulali weviniga, ukukubuza into ngasese, ungaqhagamshelana ne-imeyile yam, ndingathanda ukukubuza ngesihloko
HOla iviniga bandithumelele i-imeyile kwiakhawunti yesithandwa sam, umntu ufikelele ngaphandle kwemvume yakhe kwaye uthumela kwiakhawunti yakhe ye-imeyile, sifuna ukwazi ukuba kunokwenzeka na ukufumanisa indawo abangena kuyo okanye inombolo yefowuni abasuka kuyo fikelela kwiakhawunti yakho ukuze uthumele ii-imeyile kwaye ke ufumane umntu ongenayo. Ngaba ungandinceda ndifike kwinombolo yefowuni evela kuyo? Enkosi ukubulisa
mhlobo ndenze onke amanyathelo owabonisileyo ukufumana i-IP yeposi kodwa ayifumaneki, yintoni enye endinokuyenza?
Molweni, ndiyabulisa KILLER VINEGAR. Ndifuna ukuyazi i-num. I-IP ye-imeyile kodwa kwinyathelo lesibini ayindiniki ikhowudi yemvelaphi xa ndicofa i-imeyile, into endiyenzileyo yayikukuvula i-imeyile nasemzimbeni apho wonke umyalezo ubhalwe khona ndicofe ekunene kwaye ewe ewe Inika kum ukhetho lokujonga ikhowudi yemvelaphi kodwa kwiphepha. Igama elithi "X-Originating-IP" aliveli kwincwadana yokubhala: Ndiyathemba ukuba ungandinceda kwaye ndiyabulela kakhulu kwangaphambili.
Zihlobo, ndiyazi kuphela indlela endikubonise yona esebenza phantse kuwo wonke umntu, andinakukunceda nangayiphi na indlela nge-hotmail ip.
Ukongeza, ndiza kuthetha kube kanye, yonke into ibhalisiwe kwaye kunokwenzeka ukuba uchonge nayiphi na ikhompyuter, kodwa isikhalazo kunye nomyalelo wenkundla ziyafuneka.
IVinagre, yakuba ifunyenwe i-IP yee-imeyile ezinobungozi, ngaba ikhona inkqubo yokwazi ubuncinci abathumela kulo iphondo? Enkosi.
U-Eduardo andazi nayiphi na inkqubo eyenzayo.
Kwaye kubasebenzisi beFIREFOX ???? Kwenzekani?? kuba siyicofe ekunene kwaye akukho nto injengaleyo ivela = S
Ngaba ayikho enye indlela ye-IP?
Molo, uyazi ukuba umntu uhlala kwi-imeyile yam kwaye uzenza umntu ondim, ndingammangalela njani lo mntu Ndidinga uncedo olukhawulezileyo kuba lonke ulwazi lwam luyaziwa malunga nobomi bam
molo olungileyo kum kusebenze ukufumana idilesi ye-IP ngekhowudi yemvelaphi. Kodwa siyazi ukuba iidilesi ze-IP zinamandla, ndingayibona njani idilesi yomntu okuthumelele i-imeyile kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo ????, kufuneka ufumane inombolo ye-mac ngandlela thile? Ukuba kunjalo, yenziwa njani loo nto?
xa i-imeyile ifika kwi-akhawunti ye-hotmail evela kwi-akhawunti ye-gmail kuba ayibonisi i-x-originating ip?
UGabino barrera sitsho
Kubonakala kuyimbonakalo malunga ne-IP, kodwa beza kum bevela kwiqela le-hotmail, kuba ndingumnini. Mva nje bendifumana izicelo ezintsha ezivela kubantu abagxothiweyo ngenxa yeengxaki. ? Ndingaqinisekisa njani kwisicelo? Ewe, indinika i-IP yeqela. Kwaye ukusukela kwidilesi ôôô@hotmail.com Enkosi
Ndilibele into ... .. kwinyanga ephelileyo, bayigqobile ikhompyuter yam, kwaye ndiyabona ukuba ndifumana ii-imeyile ezinezifakelo, andizivuli, kodwa, ndiyazi ukuba nge-IP banokujonga ukuba zeziphi izibuko ezisimahla kwaye bangene Pha. Ndihlala ndiskena kwaye akukho nto iphumayo, kodwa ndinamathandabuzo. Ndingaqiniseka njani ukuba andinaso nasiphi na isipho esingafunekiyo?
IGabino eyokuqala andazi ukuba ndingayenza njani, eyesibini ine-antivirus elungileyo unokuphola kodwa ukuba uqinisekile nge-100%, fomatha kwaye ufake yonke into.
Molo! Bathumele iimeyile ezimbalwa endithuka, ndine-IP (enkosi kuwe) kuba andazi ukuba ngubani obathumeleyo, ingaba yanele ukuyichaza? Kuphela zii-imeyile ... uyazi ukuba kuya kuthatha ixesha elingakanani ukufumana ukuba ngubani? kwaye ke, ziziphi iziphumo ebeya kuba nazo?
isixhobo sokudibanisa sitsho
iviniga engumbulali iyifumene imbeko yam yeyokuba yeyiphi inene ephendula imibuzo kwabanye kwaye uyenza ngokunyaniseka okukhulu kwinto endiyibonayo kodwa hey nali iqhinga elincinci lokuba wonwabe ekufumaneni abaphambukayo abathumela ii-imeyile ngaphandle kokunqwenela, khuphela i-neotrace Inkqubo yobuchwephesha kwaye ngale nkqubo uza kubona indawo ngqo apho iimeyile zithunyelwe khona, kwaye eyona ilungileyo nge-satellite nlo caul iya kukunika indawo enkulu.
Ready mate iviniga killer ndiyathemba ukuba uyaqhubeka nokusebenzisa olo lwazi ngokulungileyo.
kwaye ngenxa yerekhodi, umgwebi olungileyo ayinguye lowo ufuna ukonzakalisa abanye, umgwebi olungileyo ngulowo ufunda kumnqweno ngenxa yokufuna ukwazi okumngenisayo kolo loyiso xa ephumeza into entsha …………………
Molo! Enkosi ngolwazi.
Omnye umbuzo, unokukopa i-IP yomntu othile kwaye uthumele ii-imeyile ezivela kwiLaptop ngale IP ikhutshelweyo
UJessi akakwazi, i-ip itshintsha ngamandla.
I-imeyile ye-hotmail ibiwe, ndinokusola ukuba ibingubani, ngaba ndingazi ukuba i-imeyile ivulwe phi, indawo ekuyo, nge-IP ngokomzekelo? salu2 enkosi.
Jonga umbuzo, ndiyifumana njani i-IP yenye ikhompyuter ndisazi ukuba inenkqubo ebizwa ngokuba ayindichazanga (le nkqubo yenzayo ikopa ubuncinci ii-IPs ezingama-500 kwaye uzitshintshe x uqobo)
Mholo. Ezinye ii-imeyile bezizokundikhathaza kwaye ndingathanda ukwazi ukuba zivela phi. Ngokucacileyo bavule iakhawunti yesiporho kwaye ukusuka apho bayabathumela. Sele ndiyizamile le nto uyithethayo ngasentla kodwa xa ndicofa ekunene (ekhohlo nakuko konke) olo khetho aluveli. Ndingafumanisa ukuba iakhawunti yenziwe phi kwaye yeyiphi indawo yeSixeko? Ndiyaluxabisa kakhulu uncedo lwakho kuba ibiyimeko ecaphukisayo kum. Ndiyabulela kakhulu ngoncedo lwakho. Imibuliso emininzi.
Uyibona njani i-IP kwi-YAHOO ?? kwaye i-imeyile endiyifumene yathunyelwa kum ngumntu ovela kwiphepha lewebhu apho bandithuka ... umntu uyandinceda
ULeon O sitsho
Molo, kulungile, isizathu sam sale imeyile kukuba ngomhla we-12/03/08 i-imeyile ifike kumama wam oneminyaka eyi-65 ethetha ngam nangodadewethu kwaye ngenxa yale imeyile umfazi ohluphekileyo uziva engalunganga kwaye uwele ebhedini… .. Ndicinga ukuba ndicinga ukuba ngubani lo mntu kodwa andinakukuqinisekisa kwaye ndingathanda oko kuba wonke umntu uhamba kule ngxaki okanye enye into efanayo bayandikhokela ukuze ndazi ukuba ngubani umntu Ndicinga …… .Ndibeka i-imeyile apho bayithumele khona ukuze ndibone ukuba ngamanyathelo endiwafundileyo apha ndingamazi ukuba ngubani na ..
Enkosi kakhulu kwaye ndiyathemba ukuba uncedo onokundinika lona ... kuba andazi nto malunga neekhompyuter.
Sele ndinedilesi ye-IP ndifuna ukwazi ukuba umyalezo uvela phi, ndithetha isixeko okanye ilizwe, ndiwatolika njani amanani e-IP
idemon emfusa sitsho
Sele ndizamile amaxesha amaninzi kodwa ayindincedi, ndiyenzile yonke into oyicacisayo apha kodwa akukho nto yenzekayo, ndiye ndabona ukuba i-IP ihlala itshintsha kwaye andiqondi, UNCEDO.
Ndingazi njani ukuba ii-akhawunti ezimbini ezishisayo zezomntu omnye nge-IP kodwa kuthekani ukuba loo mntu akandithumeli ii-imeyile Andazi ukuba ndivula nayiphi na ifom, ukuba ikhona, ndingayixabisa
Kwimeko ye-IP ndinombuzo, ndijongile kwi-IP yomntu kwii-imeyile ezahlukeneyo, kwaye uninzi lwayo luyafana, kodwa kwezinye luyahluka, aluhlukani luphelele, kuphela kwenye imihlaba yedesimali, yile nto ufuna ithi ayithunyelwanga kwindawo enye okanye oko kuthetha ukuba une-IP enamandla?
Molweni nonke ukuba i-IP yomthumeli ibonisiwe kodwa kule meko iya kuba yi-IP ye-isp umboneleli we-intanethi osetyenziswa ngumthumeli ukwazi ukuba idatha kufuneka uyenze i-whois ukuze wazi umboneleli we-intanethi osetyenziswa ngumthumeli, kwi Ukuba usebenzisa ummeleli usebenzisa i-netcat, kwaye xa unayo i-IP apho ithi XX-Originating- ip [00-00-00-00-] kufuneka uyiskene nge-netca kwaye uya kufumana idilesi yoqobo lomntu onikwe le IP.
Ligqwesile eli nqaku, enkosi nonke anazi ukuba nindinceda kangakanani ngezimvo zenu. Ndihamba nale ngxaki, bayandibhalela bendithuka bendoyikisa, kwaye banolwazi oluninzi ngam, ndiphelelwe lithemba, andazi ukuba mandithini.
Molo, ungandinceda nceda? Ndifumene i-imeyile kwi-imeyile ye-OUTLOOK, umthumeli uvela kwi-Hotmail, ndingayifumana njani i-IP kwimbono yam? Enkosi
@jeannethe ukuba ufumana izoyikiso, yenza isikhalazo.
@regio cofa kwi-imeyile ngeqhosha lasekunene le-mouse, khetha "iipropathi" emva koko "iinkcukacha" apho uya kufumana i-IP
Molo Vinegar, siqhuba njani?
Esi sithuba sibonakala sinomdla kum, nangona sakuba siguqulelwe kwinguqu epheleleyo kwaye silandela amanyathelo owabonisayo, kubonakala ikhowudi yewebhu kwiphepha lewebhu ngolu hlobo: vula, vula kwiwindow entsha, gcina indawo oya kuyo njenge… …. kodwa akukho nto yeyiphi iin ein emele ukuyenza ngokubonisa kwakho.
Molo, injani ip enomdla kakhulu, kodwa ndiye ndaqonda ukuba iiposi ezivela kwi-gmail azibonisi ip ... ngaba ikhona indlela yokuyifumana? Ndiyathemba ukuba uyazi.
Ndifunde le ngcaciso ingentla kodwa andifumani apho ithi "umyalezo wokuqala"
Khange ndiyizame Alejandra kwaye andazi nokuba ilungile na.
Molo ndingathanda ukwazi i-IP ye-imeyile abandithumela yona kwi-hotmail bukhoma, andiyiboni enkosi kakhulu
Amagama omnxeba we Anton sitsho
Molo, bendifunda konke malunga ne-Ips. Kwaye ndingathanda ukwazi ukuba kuyinto eqhelekileyo na ukuba kufike ii-IPs zivela kwikhompyuter enye… kwaye ukuba ikhona na indlela yokwazi ukuba ngaba bakuthumelela ii-imeyile zekhompyutha enye.
Molo, ndifuna ukwazi ukuba ungayifumana njani imvelaphi yedilesi apho kufika khona imiyalezo eyoyikisayo, kufuneka ndenze ntoni ukuyifumana kwaye ndifumane loo mntu kwaye unelungelo lam njani? Nceda undiphendule kungekudala, enkosi
Molo, ndinengxaki, bandibhalele i-imeyile nge-imeyile kwi-hotmail, ndizama kakubi kwaye ndifuna ukwazi umthumeli, eyona nto indikhathaza kakhulu kukuba ngaphakathi kwe-imeyile yam ngendlela endiyifunayo kwaye andiyazi .. enkosi
u omar sitsho
Molo, igama lam ndinguOmar kwaye bafaka i-msn yam kwaye andinayo, ndingenza ntoni ukuyibuyisa? Enkosi ...
Molweni bafana, okwenzekayo kukuba ndiyenzile le nto ithi kwiforum kwaye iyenzeka kukuba i-IP ayiveli, ndifumana ezinye izinto kodwa ayisiyiyo into echaza ukuba umntu angandixelela ukuba ndinokubonisana njani, ngaphezulu okanye kuncinci okubonakalayo MIME-Inguqulelo: 1.0
Uhlobo loMxholo: multipart / alternative;
I-X-MimeOLE: Iveliswe nguMicrosoft MimeOLE V12.0.1606
naluphi na uncedo enkosi kakhulu.
Ndenze inyathelo ngenyathelo le uyicacisayo kodwa ndibona umthombo ovela ku-oim oxx.xxx.xx.xxx yintoni ip?
molo indincedile kwaye ndingayifumana ip kodwa indinika kuphela idatha yeserver hayi eyomntu oyibhalayo okanye apho ikhoyo ikhompyutha. Ndingazi ukuba ngubani kwaye yeyiphi indawo yesixeko endibhalela yona?
VINEGAR ENKOSI NGENGCEBISO YAKHO KODWA KUDE NGOKU NJENGOKO UTHI ANDINAKUFUMANA I-IP YALO MAILS
Ndingathanda ukuqiniseka, umntu endingamaziyo (ngokucacileyo) ebendithumelela i-imeyile, into endixelele ukuba isuka kwisoka langaphambili, ndithelekisa ii-imeyile ezininzi kwaye ndiqinisekisa nge-IP yazo zombini kwaye ngengozi ndibone ukuba kwenye ye-imeyile i-IP iyangqinelana Ngaphezu koko, ngala mhla bobabini bandibhalela kwaye umahluko wesiqingatha seyure zombini ii-imeyile.
Umbuzo kukuba ingaba ikhona i-IP efanayo okanye inye kuphela, kuba ndiqinisekile ukuba ngulo undibhalayo, kuba iyahambelana ne-IP yayo.
diana, akukho IPs zimbini ziyafana /
# UCastor uphawule:
VINEGAR ??? Yintoni i-whois kunye ne-netcat
U-@Mel whois ngumnxeba owenziwe kwisikhangeli ukufumana ukuba ngubani umnini we-IP, kodwa ayisoloko isebenza njengoko inokufihlwa.
Kuyachukumisa kakhulu ukwazi indlela yokuchonga i-IP ye-imeyile enobungozi, ndinombulelo ongazenzisiyo kwisikhokelo sakho ...
Enkosi kakhulu ngenqaku leViniga, inomdla kakhulu kwaye indincedile ukufumanisa into esele ndiyifumene kwaye abantu ababini «ekucingelwa ukuba» bebendikhohlisa kwaye behlekisa ngam ixesha elide kwaye ibingumntu omnye kwaye enkosi koku ndizokwazi ukuyikhupha esidlangalaleni, nangona ndisenamathandabuzo okoko ndenze uvavanyo nge-ip yam efanayo kunye nee-imeyile zam ezahlukeneyo ndisebenzisa i-pc efanayo ezahlukeneyo ips, yintoni enokubangelwa koku? Enkosi kwangaphambili.
María, mhlawumbi ucime ikhompyuter kwaye utshintshe i-IP yakho okanye mhlawumbi inkonzo yakho ye-Intanethi itshintshe ii-IPs ezabiweyo ngokuzenzekelayo.
Ndinee-imeyile ezimbini ezahlukileyo ekucingelwa ukuba zivela kubantu ababini abohlukeneyo abangazaniyo.
Ndizibonile i-X-Originating-IP yakho, kwaye onke amanani ayangqinelana namanqaku, eza ngokuyafana.
Bamele ukuba ngabantu ababini abavela kumaphondo ahlukeneyo.
Ithetha ukuthini into yokuba ziyafana?
Ingxaki yam iyafana kuninzi kule ndiyibonayo, umntu uyandikhathaza kunye nentombi endithandana nayo evela kwiakhawunti ye-gmail. Kuyinyani kwaye kunokuthenjwa oko umsebenzisi haker719 akubekayo malunga neotrace yobungcali?
UFrank akaqhelananga nenkqubo kwaye ngenxa yoko akanakukucebisa okanye aqinisekise ukuthembeka kwayo.
Ndibhala nje ukuxelela iviniga ukuba ikhowudi yemvelaphi ayisebenzi kwaye ndizamile ndazama kodwa hayi.
Ndithumele isisombululo ukuze ndikwazi ukungena kule imeyile ukuba
imeyile yile: nceda.
Ndizamile ukufaka le imeyile unyaka omnye kwaye andinokwazi nokuba uyangena, ungandixelela ukuba kanjani, kodwa yonke into kwi-imeyile yam siiiiiii.
Nceda, ndingavuya kakhulu, kuba uyabona ukuba unolwazi oluninzi.
Malume uPepe sitsho
Uxolo. Emva kokufumanisa i-IP apho umyalezo we-Hotmail uvela khona, oko kuthetha ukuba i-IP ayitshintshi? Enkosi
molo inyani ndifuna ukufumanisa ipassword ye-imeyile okanye andazi ukuba ndiyithetha njani kwi-hotmail ayimbi kwaye andizukungena engxakini into eyenzekayo kukuba ndigqibe nesithandwa sam kwaye bandithumelela ii-imeyile ndiyintombazana kodwa bangabantu abadala ndifuna nje ukwazi kunokuba ndiqinisekile ukuba ngumfana wam kodwa ndifuna ukuzifumanela ngokwam ukumbanga andimfuni tu kubi kakhulu ukuze angandithuki kwaye ndibone ukuba unjani ndiyathemba ukuba undincede enkosi
Molweni, ndibhala ngempazamo kuba ndingxamile, ndiyaxolisa.
Andithandabuzi nakancinci, bendinomthunywa omdala, ebendingakhange ndiwasebenzise iiveki, kwaye, njengenyanga nganye kufuneka ndifunde iposi, kwaye ukumangaliswa endikufumanisileyo kukuba umntu othile ebe into yam »msn« iphasiwedi, kwaye oku kuzenza ngathi ndim, bendifuna ukwazi ukuba xa ufunda ip, iphasiwedi ye »msn» iyavela
Enkosi, ndizakuma ngomso xa kunokwenzeka undiphendule
UAlejandro akananto yakwenza nayo, iphasiwedi yakho ye-msn ibiwe yenye inkqubo.
Kwaye akukho nto uyaziyo, ukuze ukwazi ukuzama ukumhlangula?
Uxolo Alejandro kodwa ngaphandle kokuba uyakhumbula umbuzo oyimfihlo kwaye lowo webe iphasiwedi yakho akayitshintshanga, awunanto yakwenza.
Ukuba uyawukhumbula umbuzo oyimfihlo, yisebenzise ukukuvumela ukuba utshintshe iphasiwedi kwaye utshintshe yonke into. Amathamsanqa.
Mholo. Ndisandula ukufumanisa eli phepha kuba ndizifumana ndikwimeko engathandekiyo ...
Kutshanje ndiye "ndadibana" nomntu kwi-intanethi kwaye saqala ukuthumela omnye komnye ii-imeyile ezimbalwa. Ngokukhawuleza, lo mntu unyamalele, ndiqalisile ukuphanda kwaye ndiye ndafumanisa ukuba kumhlaba we "X-Originating-IP" wee-imeyile zakhe ndihlala ndifumana ikhowudi efanayo neye-imeyile endizifumana kumhlobo wam.
Andifuni ukuba ngoyena mntu uphambili emhlabeni, kodwa ndiye ndaqala ukuzibuza ukuba ngaba ezo imeyile azithunyelwanga kum ngumhlobo wam ezenza njengomnye umntu, ngubani lo ngoku sele enyamalele.
Ukushwankathela: umbuzo wam ngowokuba, kumhlaba we-X-oQalayo-IP, linani elibonakala njengelinye le-pc ukusuka apho bandibhalela khona okanye ngaba yindawo apho iimeyile zivela khona (kule meko bobabini basebenzise hotmail kwaye ubhale kwiphondo elinye)?
Andazi, inyani kukuba ndiyabulala ndibuza le mibuzo, kodwa ndiyalahleka kweli hlabathi kwaye ndicinga ukuba banikwe mna ngawo wonke umthetho.
Enkosi kakhulu ngayo yonke into!
Nceda, ndiyazi njani idilesi yomthumeli nje ukuba ndibe ne-IP yakhe?
Ndiqonde kakuhle, ndiyenzile, isebenze kakuhle kakhulu nge-imeyile eshushu, kodwa ndifuna ukwazi i-IP yomntu ondibhalela kwi-imeyile ye-yahoo, ngaba ikhona indlela?
molo iviniga ndingathanda ukwazi ukuba ungayenza njani ukuze wazi ip yomntu. Ndiyenzile njengoko bendixelela apha kodwa khange isebenze ukuba ungandinceda ndingayivuyela into eyenzekayo kuba ndivela kwi-vulvos kwaye andazi kakhulu okwangoku ndingavuya ndibulele ngoncedo lwakho ukuba kule nto ndiyibonayo iluncedo kubo bonke abanokubona ... Enkosi
Molo, bendifumana izoyikiso, ukuba ndifumana i-IP, ndingazi ukuba balithumela kweliphi ilizwe okanye isixeko?
Enkosi, ndilinde impendulo yakho ekhawulezileyo, nceda.
Ukwazi i-IP kunokwenzeka ukuba ulazi ilizwe kunye nesixeko.
Ndiphendule imibuzo efanayo amaxesha amaninzi kwaye yiyo loo nto ndiza kuvala amagqabantshintshi. Andizukuphendula nakweyiphi na i-imeyile ebuza into esele iphendulwe kweli phepha. Ndiyathemba ukuba ukuba unemibuzo ungayicacisa ngenqaku kunye nezimvo.
Umbuliso womdiliya kubo bonke.
Ixesha le-X-OriginalArrivalTime: 23 Jan 2013 21: 40: 52.0107 (UTC) FILETIME = [50F0DDB0: 01CDF9B2]
UKaren Gutierrez Romero sitsho
Kubonakala kum kuphela nge-imeyile yalowo uthumele i-imeyile kodwa akukho nombolo ndinokuyenza